लकडाउन लम्बिन सक्ने « Aarthik Sanjal लकडाउन लम्बिन सक्ने – Aarthik Sanjal
लकडाउन लम्बिन सक्ने
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १३:००
काठमाडौं । कारोना संकट गाजिंदै छ । महामारीको सम्भावना टरेको छैन । युरोप, अमेरिका जस्ता समृद्ध मुलुकका लागि समेत कोरोना भाईरस ठुलो समस्याका रुपमा खडा भैरहँदा हाम्रो जस्तो मुलुकले अत्यधिक होशियारी अपनाउनुको बिकल्प छैन ।
बिश्व स्वास्थ्य संघले (टेस्ट एण्ड ट्र्याक) ज्यादा भन्दा ज्यादा मान्छेको परिक्षण गर्दै निगरानी राख्न आग्रह गरिरहँदा हाम्रो मुलुकमा परिक्षण गरिएकाहरुको संख्या एक हजार पनि पुग्न सकेको छैन ।
झण्डै ८ सयको परिक्षणमा ५ जना संक्रमित भेटिई रहँदा यसले मुलुकको वास्तविक अवस्था दर्शाउँछ । देश संकटमा परिरहेको बखत लकडाउन घोषणाले मात्र संकट समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला त ? सरकारले किट उपलब्ध गराउन सकेको छैन, सबै प्रदेशमा ल्याबको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन, टेस्ट एण्ड ट्र्याकको रणनीतिमा सरकार बिफल बनेको छ ।
जनतालाई राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउने बारे खासै चासो सरकारमा देखिंदैन । मान्छे भोकभोकै पर्ने अवस्था सिर्जना भैसक्दा पनि सरकार मौन प्राय: छ । डाक्टरले उपचारमा संलग्न हुनसक्ने अवस्था छैन ।
देशमा यस बखत सरकारको उपस्थिति छ भनेर अनुभूत गर्ने ठाउँ नै छैन । प्रधानमन्त्री बिरामी छन तर पनि देशको अवस्था प्रति चिन्तित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल रोगको उपचार सहज सरल र सुलव गर्न दिन रात सकृय छन् ।
माफियाले उनलाई घेरामा पार्न खोजीरहेका छन । अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडा अबिवेकी र अनुदार बन्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उपचार गर्ने मेडिकल यन्त्र उपकरण खरिद र तयारीमा ढिलाई र राहतको प्याकेज ल्याउन सरकारले सकेन । कसरी होलान त जनता आश्वस्त ?
लकडाउनसंगै सर्वसाधारण गरिव जनता र प्राणीहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई सरकारले किन देख्दैन ? संसारलाई कोरोनाले त्रस्त बनाईरहेको बखत अरु मुलुकबाट किन सिक्दैन नेपालको सरकारले ? ढिलै भएपनि लकडाउन सहि निर्णय थियो तर खोई अन्य तैयारी ? नागरिक सचेत छन, अत्यधिक धैर्यता छ ।
खै सरकारले दायित्व निर्वाह गरेको र ? आज दायित्व निर्वाह गर्दैन, संक्रमण बढ्दै गयोभने इटालीको जस्तो हात उठाईदिन्छ सरकारले । त्यसैले नागरिक सचेतना आजको प्रमुख दायित्व हो । आफू बाचौं र अरुलाई बचाऔंको नीति अवलम्बन गर्दै कोरोना बिरुद्धको लडाईमा घरभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ ।
आफूपनि घरभित्रै बसौं र आफन्त तथा अन्य सबैलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरौं । जति मान्छेसंग संसर्ग हुन्छ कोरोनाको संक्रमण त्यति नै बढ्ने डर हुन्छ । सकारात्मक सोचौं, सहि कर्म गरौं । मनमा त्रास नराखौं, घरभित्रैबाट कोरोना बिरुद्ध लडनेहरु सधैं सुरक्षित रहन्छन ।